Home Somali News Dowlada Mexico oo gacanta ku dhigtay labadii hogaamiye burcadeed ee ugu waaweynaa
Booliiska dalka Mexico ayaa Arbacadii shalay gacanta ku dhigtay mid kamid ah hogaamiyayaasha kooxaha mafiyada ka ganacsada daroogada oo si weyn loo baadigoobayey.
Omar Trevino Morales oo ah 41 sano jir ayaa ahaa hogaamiyaha mafiyada loo yaqaan Los Zetas oo ka shaqeysa daroogada loo kala gudbiyo dalalka Mexico iyo Maraykanka. Kooxdaadi oo lagu yaqaan sida arxan darada ah oo ay dadka u dilaan.
Morales ayaa loo yaqaan (Z-42) ayaa hogaaminta kooxdaasi la wareegay sanadkii 2013 kadib markii walaalkiis oo hogaamiyahooda ahaa ay gacanta ku dhigeen ciidamada militariga Mexico.
Dowlada Maraykanka ayaa horey lacag gaareysa $5 Milyan u dil dhigtay soo-qabashada Omar Morales, sidoo kale dowlada Mexico ayaa sheegtay inay ku bixineyso $2 milyan xogta iyo soo qabashada hogaamiyahan.
Xiritaanka Omar Trevino Morales ayaa kusoo beegmaysa maalmo kadib markii ay ciidamada Mexico sidoo kale gacanta ku dhigeen hogaamiye burcadeedkii ugu weynaa ee Mexico.
Jimchii lasoo dhaafay ayaa gacanta isagana lagu dhigay Servando “La Tuta” Gomez oo ahaa hogaamiyaha Mafiyada Knights Templar, wuxuuna ahaa ninka loogu raadiska badan yahay burcada dalkaasi Mexico.